Ahoana ny fomba hananganana tranobe 3D ao amin'ny Google Earth
Betsaka amintsika no mahalala ny fitaovan'ny Google Earth, ary izany no antony nahitantsika ny fivoarany mahaliana tato ho ato, mba hanomezana vahaolana mahomby hatrany mifanaraka amin'ny fandrosoana ara-teknolojia. Ity fitaovana ity dia matetika ampiasaina hitadiavana toerana, hitadiavana teboka, hitrandrahana koordinatera, hampidirana ireo angona spatial mba hanaovana karazana ...
Jereo ny fandrindrana Google Earth ao Excel - ary avadiho ho UTM
Manana data ao amin'ny Google Earth aho, ary te-haka sary an-tsaina ireo fandrindrana ao amin'ny Excel. Araka ny hitanao, dia tany misy tendrontany 7 ary trano misy tendrontany efatra. Tehirizo ny angona Google Earth. Raha hampidina an'ity angona ity dia tsindrio havanana amin'ny "Ny toerako" ary safidio ny "Tehirizo ny toerana ho ..." Satria fisie io ...
Atsaharo ny faritra ho an'ny Google Earth
Ity rakitra ity dia mirakitra ny faritra UTM amin'ny endrika kmz. Raha vao sintonina ianao dia tsy maintsy esorinao io. Ampidino eto ny rakitra, ampidino eto ny rakitra, toy ny fanovozan-kevitra ... ny fandrindrana ara-jeografika dia avy amin'ny fizarana ny tany ho faritra toy ny ataontsika paoma, ny fanapahana mijidina dia ataon'ny meridian (antsoina hoe longitude) sy ny ...
Sokafy rakitra shp miaraka amin'ny Google Earth
Ny kinova an'ny Google Earth Pro dia nijanona tsy voaloa efa ela, izay ahafahana manokatra fisie GIS sy Raster samihafa avy amin'ny fampiharana. Fantatray fa misy fomba samihafa handefasana rakitra SHP mankany amin'ny Google Earth, na avy amin'ny rindrambaiko manana toy ny BentleyMap na AutoCAD Civil3D, na loharano misokatra ...
jeospatial - GIS, Google Earth / Maps
Geomarketing vs. Tsiambaratelo: Ny fiantraikan'ny geolocation amin'ny mpampiasa iraisana
Hatramin'ny nampidirana azy teo amin'ny sehatry ny dokam-barotra, ny geolocation dia nanjary foto-kevitra lamaody, raisina ho iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny finday, raha ampitahaina amin'ny PC, araka ny hevitry ny mpanao dokam-barotra. Na izany aza, resahina ny olan'ny tsiambaratelo, izay, raha ny filazan'ny sasany, dia ...
Asehoy ny angona QGIS ao amin'ny Google Earth
GEarthView dia plugin iray tena ilaina izay ahafahanao manao fomba fijery mifangaro amin'ny fametrahana Quantum GIS ao amin'ny Google Earth. Ahoana ny fametrahana ny plugin Raha hametraka azy dia safidio: Add-on> Tantano ny add-on ary tadiavo izany, araka ny aseho amin'ny sary. Raha vantany vao tafapetraka ny plugin, dia azo jerena ao amin'ny biraovana.…
jeospatial - GIS, Google Earth / Maps, qgis